အဖော်မဲ့သူတို့ရဲ့ အားသာချက် လေးခု
အခုခေတ်ကြီးမှာ ချစ်သူစုံတွဲကိုပဲ နေရာတကာ မြင်နေရသလို တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေဆိုလည်း ခဏခဏ စနောက်ခံရတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ တစ်ယောက်တည်း နေရတဲ့ဘဝမှာလည်း ပျော်စရာတွေအများကြီး ရှိကြောင်း၊ ကောင်းတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိကြောင်း၊ ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. တစ်ယောက်တည်း ခရီးထွက်နိုင်တယ်။
ချစ်သူစုံတွဲတွေဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ခရီးသွားတဲ့အခါ နောက်တစ်ယောက်က ကျန်ခဲ့ရင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရမှာနဲ့၊ သဝန်တိုတတ်တဲ့ ချစ်သူတွေဆိုလည်း ခရီးမထွက်ခိုင်းတာနဲ့ တစ်နေရာရာ သွားဖို့ဆို အရမ်းညှိနှိုင်းယူရပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းသမား ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတော့ဘဲ နောက်ဆံကင်းစွာနဲ့ သွားလိုရာသွားနိုင်မှာပါ။
၂. တစ်ယောက်တည်း အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ့်သဘောအတိုင်း လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကို တခြားတစ်ယောက်ဆီ ပြန်ပြောရတာ ခွင့်ပြုချက်ယူရတာဟာ အပိုအလုပ်တစ်ခုလိုပါပဲ။ တစ်ကိုယ်တည်းသမားဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ရတာမို့ ဉာဏ်သွေးသလို ဖြစ်ပြီး ပိုပိုထက်မြက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သူရှိရင် ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ ပွဲတော်တွေသွားလည်တာ၊ နှစ်ဖက်သူငယ်ချင်းတွေဆီ သွားတွေ့ကြတာနဲ့ အချိန်ကုန်စရာ အကြောင်းတွေ သိပ်များပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလို အချိန်တွေထဲက ပိုထွက်လာမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဘဝအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အချိန်တွေ များလာမှာပါ။ အေးအေးဆေးဆေး စာအုပ်ဖတ်တာ၊ တရားထိုင်တာ တွေ ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တောင် ဖုန်းသံကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ စိတ်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ အချိန်ပိုတွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိတ်ရက်တွေမှာ ဘယ်သွားမလဲ၊ ဘာလုပ်မလဲ က အစ၊ ဘယ်ကုပ္မဏီမှာ အလုပ်လုပ်သင့်လဲ ဆိုတာတွေပါ သူများ အကြံဉာဏ် မယူဘဲ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် အသေးအဖွဲကအစ အလွယ်တကူ အကူအညီတောင်းစရာ မရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်လာမှာပါ။ ရှေ့ဆက်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားကိုးတတ်ခြင်းက အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
ယခင်ဆောင်းပါးအုတ်ဖိုများကို လိုင်စင် ပြုလုပ်ပေးမည်
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုအတွင်း ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ၄၂ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ